Wararkii Ugu Dambeeyay Qaraxii Xooganaa ee saakay ka dhacay Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Wararkii Ugu Dambeeyay Qaraxii Xooganaa ee saakay ka dhacay Muqdisho
Waxaa saakay qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray xarunta Ciidamada Taraafikada oo kutaalada Degmada Shangaani ee Gobolka Banaadir , waxaana qaraxaasi ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu dhuftay albaabka laga galo xarunta Taraafikada, waxaana xiligaa kadib la maqlay rasaas la sheegay in ay is dhaafsadeen ciidamada ilaalada xaruntasai iyo ruux hubeesan.
Inta la xaqiijiyay lix qof uu ku jiro ruuxii is qarxiyay ayaa dhintay , waxaa sidoo kale ku dhaawacmay qaraxaasi dad kale oon tiradooda saxda ah laheyn, dadka dhintay ayaa waxaa ku jira dad shacab ah oo marayay halka uu qaraxu ka dhacay.
Afhayeenka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu dhuftay albaabka xarunta Ciidamada Taraafikada, waxa uuna intaa raaciyay in ciidamada ay toogteen ruux hubeesan oo doonayay in uu galo xarunta Taraafikada.
Ciidamada amaanka ayaa gaaray halka uu qaraxu ka dhacay, waxa ayna gabi ahaan xireen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xarunta Ciidamada Taraafikada, waxa ay sidoo kale ciidamada u gurmadeen dadkii ay waxyeeladu kasoo gaartay qaraxaasi.
Madaxweynaha Galmudug oo xil ka qaadis ku sameeyay Wasiir ku xigeen
Turkiga oo Markab shixnad gargaar sida u soo diray Soomaaliya